Baroordiiq iyo duco Holland loogu sameeyey mas'uuliyiintii ku geeriyootay qarixii 24kii bishii hore ka dhacay xarunta gobolka [SAWIRRO] | YoobsanNews.com
Isniin, 5 Ogoosto [Yoobsannews Online] Magaalada Amsterdam ee dalka Holland waxaa lagu qabtay kulan baroordiiq iyo duco isugu jira oo loo sameeyey dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qarixii 24kii bishii hore ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir.
Munaasabadan oo ay ka soo qeybgaleen xubno metelayey qaybaha bulshada, waxaa ka soo qeybgalayaashu ay ku muujiyeen dareenka iyo welwelka ay ka qabaan qaraxyada lagu bartilmaameedsanayo dadka waxgalka u ah bulshada.
Guddoomiyaha ururka SPA Xassan Weheliya oo madax ka ahaa guddigii soo qabanqaabiyey munaasabadda ayaa furay kulanka, isaga oo tilmaamay in jaaliyadaha Soomaalida oo middeysan in ay ka tacsiyeynayaan mashaqadii ka dhacday gobolka, laguna waayey waddaniyiin bulshada u adeegayey oo uu ka mid ahaa guddoomiyihii iyo duqii gobolka Injineer C/raxmaan Cumar Cusmaan [Yariisow].
“Kuwa doonaya in ay bulshada Muqdisho indhaha ka ridaan, waxaan ku baaqeynaa in hal meel looga soo wada jeesto shicib iyo dowlad, si aan kala reebasho laheynna loola diriro, haddii kale maalin walba waxaan u tacsiyeyneynaa waddaniyiin dalku u baahan yahay” Ayuu yiri Xassan Weheliye.
Guddoomiyaha dallada ururada Soomaalida Holland ee magaceeda loo soo gaabiyo [FSAN] Dr. Cali Cabdi Waare iyo Faadumo Faarax oo madax ka ah hay’ada Hirda, ayaa la wadaagay dareenkooda wixii ka dhacay 24kii Luuliyo xarunta gobolka Banaadir, waxaanna ay ka tacsiyeeyeen geerida dadkii ku dhintay qaraxaasi oo uu ku jiro Guddoomiyihii iyo duqii gobolka Banaadir C/raxmaan Cumar Cusmaan “Injineer Yariisow”
Faadumo Faarax, ayaa sheegtay in ay wada-shaqeyn lahaayeen Guddoomiyihii hore C/raxmaan yariisow, ayna tababarro dhanka maamulka iyo maareynta ah hay’adeedu siin jirtay guddoomiyo waaxeedyo ka tirsan gobolka.
“Soomaaliya waxaa ka baxay waddani aan bedelkiisa oo kale la heleyn. Injineer Yariisow AUN wuxuu ahaa geesi go’aansaday inuu kaalin ka qaato raadinta dowladnimada Soomaaliya” Ayeey tiri Faadumo, waxaanna ay u mahadcelisay dhalinyaradii munaasabada soo qabanqaabisay oo ay ka mid ahaayeen Xassan Weheliye, Sayid Cali Caseyr & C/llaahi Taajirow.
Guddoomiyaha ururka Iftin Shukri Hassan iyo Guddoomiyaha jaaliyada magaalada Zwolle iyo magaalooyinka ku dhow C/qaadir Cali [Nuune] ayaa ka mid ahaa dadkii madasha ka hadlay, waxeey labadoodu si qiiro leh kaga tacsiyeeyeen geerida Ex. Guddoomiye Injineer C/raxmaan yariisow.
Aniso Cabdullaahi Asad oo oo ay wada dhasheen Guddoomiyihii degmada C/casiis Sabaax C/llaahi Asad, kana mid aheyd guddoomiyeyaashii ku dhintay qarixii 24ka dhacay ayaa sheegtay walaasheed in ay aheyd qof markii horeba nafteeda u qadintay in ay u hurto dalkeeda.
“Waxaan mar walba kaga digi jirnay walaasheey qatarta dhanka ammaanka ah ee dalkii ka jirta, waxeey nagu oran jirtay “haddeeynaan dalka innaga u kicin, yaa u kacaya .?” ALLAHA u naxariisto waxaa na laga watay oo ay ALLE xagiisa u noqotay iyada oo qof yar aheyd” Ayeey tiri Aniso.
Maxamed Cabdi Yuusuf oo R/wasaare ka soo noqday TNG-dii Carta & Eng. Xandulle oo horay wasiir dalka uga soo noqday ayaa ka mid ahaa odayaashii madasha tacsida ka hadlay, waxaanna 2da mas’uul ay isla qireen in Qaranka Soomaaliya uu ka baxay shaqsi muhiim ah,
Wariye Fardowsa Tina & Abwaanad Jawaahir Axmed oo ka tacsiyeeyey geerida Guddoomiyihii hore C/raxmaan yariisow iyo mas’uuliyiintii iyo shaqaalihii ku dhintay qaraxa, waxaanna ay ka dalbadeen dowladda Soomaaliya in ay baaritaan dhab ah ku sameyso ciddii ka dambeysay qaraxaasi.
Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir AUN C/raxmaan yariisow ayaa sannadkii hore booqasho ku yimid dalka Holland, waxaanna uu la kulmay inta badan jaaliyada Soomaalida, isaga oo xiriir wanaagsan la lahaa inta badan shaqsiyaadka hormuudka ka ah jaaliyadaha Soomaalida.
Previous: Saxafi xarig ku muteystay markii uu baraha bulshada ku weeraray Madaxweynaha
Next: Halkan ka daawo 42-guuradii ka soo wareegtay maalinta xorriyadda Jabuuti